Amanzi epaki "Banana Republic" isendaweni entshonalanga nogu YaseCrimea Peninsula, eduze nedolobha Yevpatoria. Nakanjani ukuthi indawo awuzange ekhethwe ithuba - emabhishi anesihlabathi kwendawo, kolwandle efudumele futhi sezulu esipholile, lapho cishe kungabikho moya kanye neziphepho, konke lokhu kwenza yezitolo efaneleka kakhulu yokwenza imindeni enezingane. Phakathi YaseCrimea yezinkathi ezithile amapaki amanzi, kuba "Banana Republic" kubhekwa isakhiwo esikhulu kunazo zonke, okuhlanganisa ezihlukahlukene Ukugabavula ukuphakama futhi eyinkimbinkimbi obuhlukahlukene. Ngakho-ke, lapho ungachitha isikhathi njengoba ingane futhi omdala impilo futhi kumnandi.
Lena epaki amanzi emangalisayo e Yalta itholakala phakathi kwamanzi kwe-Gulf Kalamitsky ngakolunye uhlangothi kanti usawoti amachibi ngakolunye. Futhi ngaleso eyinkimbinkimbi izokwakhiwa amachibi eziyisishiyagalombili, okuhlanganisa ezivamile futhi hydromassage, futhi bonke ngothi lwabo sizungezwe abangaphezu kuka-25 amanzi ezikhangayo. Ezinye zazo ukufinyelela kolwandle, futhi abanye zixhumene ne amadamu yokufakelwa. Amazinga amanzi kulezi amadamu njalo sigcinwe uhla 22-26 degrees centigrade, ngisho noma ulwandle ngesikhathi esisodwa noma esinye epholisa kakhulu. Yingakho uphumule bese nijabula epakini amanzi, unga kungakhathaliseki lokushisa lamanzi olwandle.
A amanzi ipaki "Banana Republic" endaweni ayizinkulungwane 40 square metres. Ngaphakathi eziyinkimbinkimbi bakhululekile uphumule abantu abayizinkulungwane 2.5, kodwa lesi sibalo kwandisa kakhulu ngesikhathi isiqongo ngesikhathi sikaKhisimusi noNcibijane. Eduze epaki amanzi kukhona amathilomu eziningi zokudla kanye ezitolo, lapho ungahlala udle, bese utsenga eziyisikhumbuzo ambalwa.
Banana Republic - Aqua Park, ogama design uhlukile. On insimu yalo is a lot of utshani, lapho wonke umuntu kungaba uphumule, amanga emuva kwi lounger ilanga futhi ujabulele uhlobo lwendawo. Eceleni endaweni okuhlalwa eyakhelwe imithombo, izimpophoma yokufakelwa futhi okugcinwa, anikeza lonke eziyinkimbinkimbi ikhubalo ezithile futhi bekhonze. Futhi, yonke indawo zihlalo lizungezwe inani elikhulu nezihlahla ezingavamile, izinhlobo zezihlahla nezimbali, phakathi okuyinto ngokuvamile abahlala izinkawu tropical nopholi.
Worry ukuthi bengidlala phezu ezikhangayo amanzi, ingane yakho sizothola yilanga, hhayi zinkulu. Amanzi epaki "Banana Republic" ifakwe uhlelo isithunzi okukhulu, esinikela Ukungena esiphezulu emini futhi ngaleyo ndlela ivikela zonke holidaymakers elangeni. Zonke zokukhosela kudingekile zitholakala laphezu kweziziba eyinkimbinkimbi, futhi ezinye ugu endaweni ulwandle.
Inzuzo ezibalulekile, okuyinto uqhosha epaki amanzi "Banana Republic", futhi khona ukugeza ngezinsalela Jacuzzi kanye obishini. Futhi kulesi siqiwu kukhona massage izihlalo, ukusetshenziswa okungaba ngokuphelele khulula. Nokho, ngemva eside amanzi zokwelapha kanye ekwehleni kuma-slides ezahlukene, ungakwazi sokuphumula nge umdlalo we tennis. I "Banana Republic" kukhona izinkantolo tennis eziningana, okuyinto zivulelwe zonke izivakashi ubusuku nemini.
NPP "Pyramid", Petersburg: kanjani lapho? Incazelo, izithombe
Izikhwama Electronic - emzweni odlulayo noma isidingo?